बुसान फिल्म फेस्टिभलमा ‘गुडबाई काठमाडौं’को प्रिमियर | Glamour Nepal
लामो समयदेखि पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेको फिल्म ‘गुडबाई काठमाडौं’ अन्ततः प्रदर्शनका लागि तयार भएको छ। निर्माण सुरु भएको करिब ७ वर्षपछि प्रदर्शनका लागि तयार भएको फिल्मले प्रदर्शनको सुरुवात भने नेपालबाट नभई कोरियाबाट गर्दैछ। यो फिल्म दक्षिण एसियाकै प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभल बुसानका लागि छनोट भएको छ।
बुसान फिल्म फेस्टिभलमा छनोट भएको फिल्म सोही फेस्टिभलका दिवंगत निर्देशकको नाममा स्थापित जिमजिसिओके अवार्डका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेको छ। सो अवार्डका लागि एसियाबाट ५६ वटा फिल्म प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। ‘विन्डो अन एसियन सिनेमा’ शीर्षक अन्तर्गत रहेको प्रतिस्पर्धामा भारत, चीन, जापान, थाईल्यान्ड, अफगानिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका देशका फिल्महरु सहभागी रहेका छन्। प्रतिस्पर्धामा विजेता बन्ने फिल्मले दस हजार डलर बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ।
एक दशकअघि देशमा विद्यमान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा बनेको फिल्मले फरक फरक सपना बाँचेका तीन युवाको कथामा आधारित रहेको छ। फिल्मले राजनीति द्वन्द्वका कारण युवाहरू कसरी आफ्ना सपना त्यागेर पलायन हुन बाध्य भए भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरेको छ।
बुसानमा आउँदो शुक्रबार फिल्मको वल्र्ड प्रिमियर हुँदैछ। निर्देशक नबिन सुब्बा बिहीबार फिल्मको वल्र्ड प्रिमियरकालागि कोरिया उड्ने भएका छन्। उनले विश्वका केही प्रतिष्ठित अवार्डमा सहभागिता जनाइसकेपछि मात्र फिल्मको प्रदर्शन मिति तय गर्ने जानकारी दिएका छन्।
‘बुसान बाहेक अन्य थुप्रै फेस्टिभलमा फिल्म पठाएका छौं। थुप्रै राम्रा फेस्टिभलले चासो देखाइरहेका छन् तर फाइनल भइसकेको छैन। व्यक्तिगत रुपमा भने बुसानमा फिल्मले कस्तो प्रतिक्रिया पाउँछ सोही अनुसार बाँकी फेस्टिभल र नेपाल प्रदर्शनको पनि रणनीति बनाउने छौं,’ सुब्बाले भने।
फिल्ममा कर्मा, सुवर्ण थापा, निखिल गुरुङ, माल्विका सुब्बा, माला लिम्बू आदि कलाकारको अभिनय रहेको छ। राजेश गोङजु र शोभा चन्दको पटकथा रहेको फिल्मलाई शोभा चन्दले नै सम्पादन गरेकी हुन्। फिल्ममा सोहम ढकाल र पदम सुब्बाको लगानी छ।
तपाईंलाई यो पोस्टहरु मन पर्न सक्छन!
थप नयाँ पोस्टहरु । नेपाली फिल्मी समाचार
‘लिली बिली’को गीत: स्कटल्याण्डको चिसोमा प्रदिप र जसिताको रोमान्स
‘नेप्टे’को ‘सुपारी ‘काँचो’ – हेर्नुहोस् रमाईलो भिडियो
‘आसुसेन फिल्म्स’ले सर्ट फिल्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने
कस्तो छ – आर्यन र प्रियंकाको ‘बटरफ्लाई’ ?
यूरोपमा खिचिएको चलचित्रमा गौरव, पवित्रा र बुद्धिको मस्ती
कस्तो छ ‘मिस्टर झोले’ ? – दर्शक प्रतिक्रिया [भिडियो सहित]
‘ब्लाइन्ड रक्स’मा वेनिशाको उड्यो मन
हिन्दि चलचित्रका कारण ‘ह्याप्पी डेज’ रिलिज स्थगीत
‘कान्छी’ सोलो रिलीज – दङ्ग परिन श्वेता
‘मिस्टर झोले’ लाई जनवरी १४ तारिख हंगकंगमा हेर्न सकिने
फेशन शोमा अभिनेत्री स्वस्तीमा, अशिस्मा र मलिना
रातो पहिरनमा खुलेकी मोडल तथा अभिनेत्री अनु शाह ।...
तस्विरहरुमा हेर्नुहोस् – कुन जोडी राम्रो ?
आकर्षक पहिरनका कारण आकर्षणको केन्द्रमा नम्रता
‘ऐश्वर्य’कि नायिका दीपिका प्रसाईंको...
‘प्रेम गीत २’ कि नायिका अश्लेषा अब कता ?
‘लिली बिली’को गीत: स्कटल्याण्डको चिसोमा प्रदिप...
‘आसुसेन फिल्म्स’ले सर्ट फिल्म प्रतियोगिता...
पि-डलर-एम र आरजे-एस-आईको ‘प्रयास’
यो साताको लोकप्रिय पोस्टहरु
आमा बन्दै नायिका निशा अधिकारी – तस्विरहरु हेर्नुहोस्
डान्स छोडेर सिरियल तिर कार्टुन क्रु – Cartoonz Crew
प्रियंका-आर्यनको पोजिसन ! भिडियो हेर्नुहोस्
Nepali Movie RAJJA RANI Keki Adhikari Najir Hussain Full Video Clips Trailer Release Event